ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးလေး ခေါင်းတစ်ခါခါ ဖြစ်နေတာ ပုံမှန်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ စိတ်ပူနေကြတဲ့ မေမေ၊ ဖေဖေတို့အတွက်
31.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ပြုံးရယ်လာတာ၊ လက်စုပ်လာတာ၊ ခြေလေး...
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု (၆) မျိုး
29.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေမှာလည်း သူ့ဟာသူ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေအနေနဲ့ စွမ်းရည်အသစ်တွေကို သင်ယူရတယ်၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ တွေ့ရတယ်၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်...
28.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေမှာ အအေးမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်တီဘီ ရောဂါ၊ ဓာတ်မတည့်မှု၊ ပန်းနာရင်...
26.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေ ချောင်းဆိုးရင်းအန်ချလိုက်တာက စိုးရိမ်စရာလား။ ရင်သွေးလေး အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးရင်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရအန်တာကို မြင်ရတဲ့မေမေတို့အတွက်ကတော့ အတော...
25.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေတစ်ဟွတ်ဟွတ်နဲ့ ချောင်းဆိုးကြတဲ့ ရာသီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ မေမေတို့ကို ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ဘာတွေသတိထားရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
တွေ့သမျှအကုန်ဝါးတတ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေအတွက် အကြံကောင်းများ
တွေ့သမျှ စိတ်ရှိလက်ရှိကောက်ဝါး ပါးစပ်ထဲကောက်ထည့်တတ်တဲ့ သားသားမီးမီးအတွက်စိတ်ညစ်နေရပြီလား။ တကယ်တော့ တွေ့သမျှကောက်ဝါးတာကသူတို့ကိုယ်ခန္ဓာဖွံဖြိုးမှုအတွက...
ကလေးက ဒီအတိုင်းပဲ စကားကိုနားမထောင်တတ်တာလား? ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေလား?
24.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
Oppositional defiant disorder (ODD) ရှိတဲ့ကလေးတွေက အများအားဖြင့် စိတ်တိုစိတ်ဆိုးလွယ်၊ ကလန်ကဆန်နဲ့ အငြင်းပွားတတ်တဲ့သဘောရှိကြပါတယ်။
ချောင်းဆိုးနေတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဒီလိုလေးတွေပြုစုပေးရအောင်
23.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ချောင်းဆိုးနေတဲ့သားသားမီးမီးကို ဒီလိုလေးတွေ စနစ်တကျပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးကြရအောင်။ သူလေးလည်းသက်သာ မေမေလည်းအနားရ စိတ်လည်းအေးဖို့ ကောင်းမွန်ထိရောက်တဲ့...